Pu Hau Do Suan Lawmhpi Cio Hna Usih..Hi Bantuk Dirhmun A Kan Phak Piak Khawh Hi Chinmi kan Hmai A Hngal Tertuasi. – Onlinenungak
Pu Hau Do Suan Lawmhpi Cio Hna Usih..Hi Bantuk Dirhmun A Kan Phak Piak Khawh Hi Chinmi kan Hmai A Hngal Tertuasi.
By chin tawi on December 1, 2020
Pu HAU DO SUAN
Tedimapiang, apa chu Pyidawtha (Tahan – Tuingo kawngakhua) Baptist kohhran dintu. Mandalay ah BA, Singapore ah MPA (Master in Public Administration). 1979 ah foreign ministry ah rank hniam tak atranginalut. A kaisang zel a. Burma sipai sorkar lai khan sipai officer ni ve si lova Ambassador tling thei mi tlemte zinga miani.
A nupui chu Kawl Buddhist diktakani a, Ne Win hun laia deputy minister fanuani a. Pu Hau Do Suan nen an inneih hnu hian ,apasal nungchang thra lutuk hiamangang a, an pa lukham hnuauia Bibleachhiar thrin chuahmu a,achhiar ve ta a, an pa mithraanih chhan chu Bible ring Christiananih avang tihahmu ta a, Christian ahalut ve.
An nupa in inngaitlawm, kawm nuam tak an ni.
Photos 3-4-5: Taken in February,2017 at BACI Office, Indianapolis, USA.
Kawl tawng chhiar thei tan,achanchin tlem…
ဝါရင့် နိုင်ငံခြားရေးသံတမန်ဖြစ်သော ချင်းအမျိုးသား Pu Hau Do Suan သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့ မှ စတင်ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခြင်းခံရကြောင်း သိရသည်။
Pu Hau Do Suan သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ သမိုင်းဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သူဖြစ်သလို၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ Master in Public Administration (MPA) ဘွဲ့အားလည်းရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ စတင်ဝင်ရောက်ကာ တာဝန်အသီးသီး ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံအနှ့ံအပြားတွင် တာဝန်အဆင့်ဆင့်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Director General အဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ်၄င်း၊ နောက်ဆုံးတွင် ကုလသမဂဆိုင်ရာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ New York ရှိ UN ဌာနချုပ်တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စတင်တာဝန်ယူခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်ဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်သည်။(Credit: Chin World Media)